Beesha Ugaadh Aadan Maxamed (Aadan-madoobe), inteedii dagaalkii sukeeye ee qarnigii 19aad iyadu galbeed u soo haajirtey, ayaa sida la wada ogyahay, ee taariikhdu ay inoo bayaamisey, ayaa iyadu aasaaskii isbahaysigan Toljecle, ayaa iyadu sabab u ahayd; oo kaalin mug leh ka soo qaadatey.
Beesha Ugaadh Aadan (Aadan-madoobe) ka hor, beel Toljecle ah, oo galbeed laga yaqaanney'i, ma aanay jirin. Jilibbadan Toljecle ee haddeerna, qoys waliba beel kale ayuu magwadaag la lahaan jirey. Waxana mag ay magaca Toljecle ku wada bixiyaan ugu horeysey, markii ay beesha Ugaadh Aadan (Aadan-madoobe) ay magacan Toljecle, ay kula wada bahoobeen.
Isbahaysigan oo dhaqangaley qarnigii 20aad, aya'ay iyadu – waa beesha Ugaadh Aadan galbeed e – ay horseed ka ahayd, oo ay iyadu buddhig u ahayd. Waxa ay beeshan'i ahayd: maskaxdii iyo muruqii uu Toljecle'han maantu uu ku dhismey, ee uu ku hana'qaadey. Waayo, beesha Ugaadh Aadan-madoobe ee galbeed, ayaa iyadu tira ahaan iyo deegaan ahaan'ba ugu badneyd.
Hoggaan ahaan, ama madaxdhaqan ahaan'na, iyada – waa beesha Ugaadh Aadan'e - ayaa Toljecle u arriminjirtey, oo (chief) Caaqil Yuusuf Nuur (Cadde) iyo (Baalabaad) Iimaan Wacays (Iimaan Toljecle), oo labadoodu'ba Ugaadh Aadan ahaa, ayaa iyagu beesha hogaaminjirey.
Haddaba sida guud ahaan, ay beesha Ugaadh Aadan-madoobe oo idil'i, ay u kala deegaanka noqotey, ayay inteeda galbeedna ay u kala ood noqotey.
Waqtigii isbahaysigu uu galbeedka ka samaysmey, ayaa ku beegan xilligii ay beeshii Habar Toljecle ama Toljecle, ay magacii iska baddaleen, ee ay Habar Jecle la wada baxeen. Waayo, intii aanu magacan Habar Jecle aanu soo bixin, waxa beesha oo dhan la odhanjirey: Habar Toljecle oo lagu soo gaabsanjirey, Toljecle.
Dirir Warsame - Habar Jecle
Sayid Maxamed Cabdulle Xasan - Ogaadeen
Masafadayda ula taga.
Axmed Jaamac Cali (Caad-leef) – Habar Jecle
Magacyadu wa'ay isbadbaddali karayaan, laakiin abtirsiintu waa mid, oo waa halkii ay ahayd.